Xaaji Muuse Suudi yalaxow: “Muqdishu Waan Nabadeyn Doonaa, ee Marmarsiiyo Kale maxaa u ah Kooxda Jowhar”
Buluugleey, Thursday, September 1st, 2005
Xaaji Muuse Suudi Yalaxow oo ka mid ah dagaaloogayaasha fadhigoodu yahay magaaladda Muqdishu ee ay is hayaan dhinaca kale ee Col. C/hi Yuusuf oo ay xaruuntoodu tahay Jowhar ayaa sheegay in dhinacooda ay nabadeyn doonaan magaaladda Muqdishu ka dibna la arki doono waxa kale ee u qarsoon kooxda Jowhar. Warkaas waxaa laga soo xigtey mar uu maanta si xamaasadeysan uu ula hadlayay saxaafadda Muqdishu. Xaaji Yalaxow waxa uu sheegay in xubnaha wasiirada ee ku sugan Muqdisho ay yihiin magac u yaal tan iyo inta ay soo afjarayaan wax ka qabashada hawlaha lagu sugayo amniga gobolka Banaadir. Waxa sidoo kale uu sheegay iney socdaan dhameystirka hawlaha lagu sugayo amniga gobolka Banaadir, taasoo uu tibaaxey iney udub dhexaad u tahay dhaqdhaqaaqyada xubnaha dagaaloogayaasha ku sugan magaalada Muqdisho.
Xaaji Yalaxow waxa uu xusay in kooxdoodu ay yihiin magac u yaal tan iyo inta ay meel ay iska saarayaan amnidaradda ka jirta gobolka Banaadir, oo ah caqabada ugu horeysa ee hortaagan hawlaha adeega guud ee qaranka Soomaalida uu ku fulin lahaa waaxyaha dowlada xubnaheeda kala duwan. Wuxuu sidoo kale sheegay xaajigu iney socdaan hawlaha lagu tababarayo maleeshiyooyinka ku xareysan xerooyinka Hiil Weyne iyo Laanta Buure. Isaga oo hoosta ka xariiqay in ammaanka Muqdishu ay sugi doonaan ciidamadaasi xareysan balse ay dhici doonin ciidamo laga soo uruuriyey gobolka Bari in ay yimaadaan Muqdishu. Arrintaan oo uu Muuse Suudi ula jeedo ciidamadda uu Col. C/hi Yuusuf ku uruursanayo Mustaxiil oo uu ka soo aruursaday beeshiisa iyo cadowga Itoobiya. Ciidamaddan ay dagaaloogayaasha jooga Muqdishu ay ku uruuriyeen ayaa wadno xanuun waxa ay ku yihiin qorshayaasha Col. C/hi Yuusuf iyo dowlada Itoobiya oo sugi la’ iney arkaan Muqdisho oo mar keliya ka amar qaadata.
Xaaji Muuse Suudi Yalaxow oo ah dagaalooge aan waayoaragnimo u lahayn xeesha dagaalka iyo aqoondarro uu u leeyahay nidaamka iyo maamulka dowladnimada ayaa ku doodaya iney kala dambeyntii ku soo celinayaan magalamadaxda dalka Soomaaliya. Dagaaloogayaasha ka soo jeeda Muqdishu ayaa ah kuwo gacnahooda ku galay dhiig badan ee sokeeye iyagoo marna adeegsanaya diinta marna cuskanaya qabiilka ay ka soo jeedaan. Dableyda ay ku uruuriyeen xerooyinkii hore ee Ciidanka Xoogga Dalka waa maleeshiyooyin galay dembiyo badan kana soo jeeda beelaha USCda. Maleeshiyooyinkaas ayaa ah kuwa aysan xirin wax xeera oo marka ay rabaan ka soo fakada xeryaha ay ku jiraan iyagoo wata gaadiidka dagaalka si ay jidgooyooyinkii ay rayidka ku baadi jiriin ugu noqdaan marka ay waayaan agabkii ay ku noolaan lahayeen.
Inkastoo aysan waxba isdooriin dagooloogayaasha meelkasta oo ay joogaan iyo beelkasta oo ay ka soo jeedaan, haddana Xaaji Muuse Suudi Yalaxow iyo dhagarqabayaasha ay isku heybta yihiin ayaa ah kuwa ugu liita oo Muqdishu ay ka noqon weysey magaalo u noqota caasimad Soomaalida dhamaanteed. Waxey diidayaan ciidan beeleed ka yimaada Bari, waxeyna doonayaan ciidan beeleed ka yimaada degaanka Banadir inuu keligiisa magaalomadaxda Soomaaliya ay ka noqdaan saraakiisha suga nabadgelyada. Waxaan isweydiin laheyn in aragtidooda gaaban ay ku dhamaan doonto guuldaro sida ku dhacday Col. Cabdullahi Yusuf oo ku soo hogaamiyey Soomaalida danaha cadowga Itoobiya iyo dowladnimo ku qotonta dano qabiil.
Soomaalida waxaa nabadeyn kara shaqsiyaad ka fayoow afooyinkii loo geystey shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed, waxaana u horseedi kara sinaan iyo xoriyad buuxda oo ay ku helaan dalkooda nidaam ay hagayaan aqoonyahano dadku toos u soo doorto oo dadka u qora ciidan nadiifa iyo shaqaale lagu soo xulay ku adeegida xirfadooda iyo kartida aqoontooda.
Maxamed amiin, Buluugleey Soomaaliya